Maqaallada Bobby Gill ee Martech Zone |
Maqaallada by Bobby Gill
Kahor aasaasida shaybaarka buluugga ah ee 'Label Labs' sanadkii 2009, Bobby wuxuu maamule barnaamij ka ahaa Microsoft ee qeybta Servers & Tools. Isaga iyo wada-aasaasaha Jordan Gurrieri, Bobby ayaa wada-qoray Appsters: Hagaha bilowga ah ee hal-abuurka ganacsiga. Shaybaarada Buluugga ah ee loo yaqaan 'Blue Label Labs', doorka Bobby ee ah agaasimaha guud waxaa ka mid ah bixinta kormeer istiraatiijiyadeed iyo farsamo dhammaan barnaamijyada aan soo saarno. Bobby wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Waterloo oo uu ka qaatay Bachelor-ka Xisaabta iyo Sayniska Kombuyuutarka wuxuuna dhammeeyey MBA-ga Dugsiga Ganacsiga ee Columbia. Wuxuu jecel yahay noocyada.